This isabi-lingual pamphlet to inform about the message of World Environmental Day. It presentsafew questions and answers about the Environmental Issues and World Environment Day. We publish this pamphlet to honor the activities of World Environment Day 2010, of which it's theme is "Many Species, One Planet One Future".
СохранитьСохранить «World Environment Day 2010 Q &amp;amp; Ans» для последующего чтения
What are the most pressing environmental issues fac‐ How can young people living in cities affect urban
ing cities today? Do these differ significantly between issues, which generally fall to politicians, architects
the developed and the developing worlds? and engineers to resolve?
Environmental issues in different cities and countries Politicians and engineers are there to make the best
are affected by the level and scale of human activities choices and create opportunities for healthier and
MYANMAR YOUTH NETWORK and the resulting pressure on the environment. Pollu‐ more secure lives for their citizens. Young people can
tion, energy and waste generation top the list in our live by example by choosing environmentally friendly
congested urban areas affected by the expansion of transport like walking, cycling, using public transport
transport and industry. Transport, for example, is the and sharing lifts, and by getting organized and making
fastest growing source of carbon dioxide emissions their voices heard about including environmental
Questions from burning fossil fuels – the main cause of global
considerations in city planning. This will force the
policy and decision makers to meet their demands.
Answers Many cities draw natural resources from surrounding
areas to support large populations. Is this desirable –
Fifty years ago, less than one person in three lived in
a town or city. Soon most of the world’s people will
do so. How will the natural environment cope as we
We cannot avoid using natural resources. They provide
become an increasingly urban species?
us with goods and services to meet our needs, regulate
If the current trend of increasing urbanization contin‐
life‐support functions and enrich our social well‐being.
ues, it will have serious environmental and health
But we are not using this natural capital wisely, and our
implications including irreversible damage to ecosys‐
needs and demands are ever increasing. Sadly, we are
tems. This can be avoided if we adopt innovative
also using nature asadumping ground for wastes and
ideas and actions. People mainly move to cities in
emissions. The major challenge is to move towards us‐
search of better opportunities; if these were available
What is the purpose of World Environment Day? ing renewable forms of products and services to better
for semi‐urban and rural dwellers, the trend and its
Who is the target audience for its message, and the lives of every individual.
environmental implications could be reduced. This
Given that cities have suchahigh demand for electric‐ remainsamajor challenge.
World Environment Day is the day on which the
United Nations seeks to stimulate awareness ity, why don’t more of them switch to renewable
about the state of the environment and enhance forms of energy? Wouldn’t this make economic and
political attention and action worldwide. It re‐ environmental sense?
minds all nations and peoples thatasafer and Yes, it makesalot of sense. However, citizens – both as
more prosperous future relies on informed, em‐ consumers and producers – are not fully aware of the Myanmar Youth Network
powered people who are active agents in protect‐ carrying capacity of the planet and of the impact of the
intensive use of non‐renewable natural resources on No. 136-137, Damayone Street,
ing the environment – so that we can all cherish
current and future generations. Public and private sec‐ Dawbone Township, Yangon
and enjoy living on this planet.
tor organizations need to invest in renewable forms of + 95 (0)9508 7234, 504 4120
energy, infrastructure and facilities. info@myanmaryouthnetwork.org
မတူညီတဲ့ မြို့ပြတွေ နိုင်ငံတွေမှာ လူတွေရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက် တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ဆောင်ရက
ွ်သူတွေ၊ Aင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ဗိသုကာပညာ
Aဆင့်Aတန်းတွေကိုလိုက်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာ ဖိAားတွေ ရှင်တွေ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနေရတဲ့ မြို့ပြကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် မြို့ပြမှာ
ဖြစ်လာကြပါတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုတွေ နေထိုင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေကရော ဘယ်လောက်ထိ သက်ရောက်မှု
ထွန်းကားလာတာနဲ့Aမျှ မြို့ပြတွေမှာ ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ စွမ်းAင်ကိစ္စတွေ၊ ရှိနိုင်ပါသလဲ။
Aညစ်Aကြေး ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ထိပ်တန်းကို နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေ၊ Aင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့
ရောက်လာပါတယ်။ Uပမာပြောရရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးဟာ ပြည်သူတွေAတွက် ပိုပြီး လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဘ၀တွေ၊ ပိုပြီးကျန်းမာစေဖို့ Aခွင့်
ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကို လောင်ကျွမ်းရတဲ့Aတွက်ကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင် Aလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Aကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေကို
ေAာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှု Aမြန်ဆုံး ကြီးထွားလာပြီး ကမ္ဘာကြီး လုပ်ကြရပါတယ်။ လူငယ်တွေAနေနဲ့တော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
ပူနွေးလာရတဲ့ AဓိကAကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆီလျှော်မှုရှိတဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ Aများသုံး သယ်ယူ
ပို့ဆောင်ရေးကို Aသုံးပြုခြင်း၊ ကားဝေမျှသုံးစွဲခြင်း၊ စနစ်တကျ စုစည်း
မြို့ကြီးပြကြီးတွေဟာ ကြီးမားတဲ့လူUီးရေကို ထောက်ပံ့နိုင်ေAာင်လို့
ခြင်းAားဖြင့် မြို့ပြရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံမှုကိစ္စတွေကို
Aနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Eရိယာတွေကနေ သဘာဝသယံဇာတတွေကို
စU်းစားတွေးဆနေတဲ့ သူတို့Aသံတွေကို လူတွေပိုပြီး သိလာေAာင်
ဲ နရပါတယ်။ Aဲဒါ ဖြစ်သင့်သလား၊ ရေရှည် တည်တံ့ပါ့ မလား။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေAနေနဲ့ ဒီလိုAပ်
သဘာဝသယံဇာတတွေကို မသုံးစွဲဘဲနေဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Aဲဒါ
ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ တွန်းAားတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်နေ့ တွေကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AခြေခံလိုAပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်း
် ယ်။ ဘ၀ရပ်တည်ရေးကို ထိန်းညှိပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှု လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ကျော်ကဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးယောက်ထက
၂၀၁၀ ဘ၀တွေကို ကောင်းမွန်လာစေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ မြို့ပြမှာ နေကြတာပါ။ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတိုင်း
ဒီသဘာဝရင်းမြစ်တွေကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်မသုံးကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ က မြို့ပြမှာပဲ နေချင်ကြတော့တယ်။ Aဲသိလု မြို့ပြနေထိုင်သူ များပြား
AမေးAဖြေများ လိုAပ်ချက်တွေနဲ့ လိုAင်ဆန္ဒတွေက Aမြဲတမ်းတိုးပွားနေတယ်။ ၀မ်းနည်း လာတာကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာလဲ။
စရာကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ဟာ သဘာဝတရားကို Aညစ်Aကြေး တကယ်လို့သာ မြို့ပြနေထိုင်မှု တိုးပွားလာတဲ့ လက်ရှိရေစီးကြောင်း
တွေ စွန့်ပစ်ထုတ်စရာနေရာ တစ်ခုလိုAသုံးပြုနေကြတယ်။ Aဓိက ကြီးက မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင် ဂေဟစနစ်ကို ရှောင်လွှဲမရတဲ့ ထိခိုက်
စိန်ခေါ်မှုကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်ဘ၀တွေ ပိုပြီး ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်စေပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြင်း
ွ်ချက်က ဘာလဲ။ ကောင်းမွန်လာေAာင်လို့ ပြန်လည်ပြီး Aသစ်တဖန်Aသုံးပြုနိုင်မယ့် ပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က တီထွင်ဆန်းသစ်
ွ်ပြီး ကျင်းပရတာလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ပါဝင် ကုန်စည်တွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပိုသုံးလာနိုင်ကြဖို့ကိစ္စပါပဲ။ ထားတဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ချနိုင်မှသာ ဒါကိုရှောင်နိုင်
ွှဲိုင်ပါသလဲ။ မှာပါ။ Aခွင့်Aလမ်းတွေပိုပြီးရနိုင်ဖို့ လူတွေဟာ မြို့ကြီးတွေဆီကို
မြို့ကြီးတွေဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဒီလောက်မြင့်မားတဲ့နှုန်းနဲ့ လိုAပ်နေပြီ
ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ဆိုတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရွှေ့ပြောင်းသွားကြတယ်။ တကယ်လို့သာ တောမကမြို့မကျဒေသတွေ၊
ဆိုရင် ဘာကြောင့်မို့ ပြန်လည်Aသစ်တဖန်Aသုံးပြုနိုင်မယ့် စွမ်းAင်
Aကြောင်း စိတ်ဝင်စားမှုနှိုးဆွနိုင်ေAာင်နဲ့ ကမ္ဘာAနှံ့ နိုင်ငံရေးAရ ကျေးလက်တွေမှာပါ Aခွင့်Aလမ်းတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် သဘာဝ
ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲပြီး မသုံးကြတာလဲ။Aဲဒါမှ
ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်နိုင်ေAာင် ကုလသမဂ္ဂက ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း လျှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးAတွက်ရော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်Aတွက်ပါ တွက်ခြေကိုက်
ကျင်းပတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိတဲ့၊ သာယာဝ ခုထိတော့ ဒါက Aဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
ပြောမှုရှိတဲ့ Aနာဂတ်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို့
ဟုတ်ပါတယ်။ Aဲသလိုဆို တွက်ခြေကိုက်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်
ဗဟုသုတနဲ့ စွမ်းAားရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာ တည်မှီလိမ့်
သူတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တတ်နိုင် တဲ့
မယ်ဆိုတဲ့Aချက်ကို ဒီရက်မှာ နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းက သတိ
Aတိုင်းAတာကို မသိဘူးကြဘူး။ လက်ရှိနဲ့ Aနာဂတ်မျိုးဆက် တွေက မြန်မာလူငယ်ကန
တရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့Aားလုံး ဒီကမ္ဘာကြီး
ပြန်လည်Aသုံးပြုလို့ မရနိုင်တော့မယ့်နည်းတွေနဲ့ သဘာဝသယံဇာတ
ပေါ်မှာ နေပျော်စရာ ဖြစ်လာမှာပါ။ Aမှတ် ၁၃၆-၁၃၇၊ ဓမ္မာရုံလမ်း
တွေကိုသုံးခြင်းရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့Aကျိုးသက်ရောက်မှုကို မသိကြဘူး။
မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ Aရေးကြီးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်း ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကဖြစ်စေ ပြန်လည်Aသစ်
ကျင်ကိစ္စတွေက ဘာတွေလ။ဲ Aဲဒါတွေက ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ + ၉၅ (၀) ၉ ၅၀၈ ၇၂၃၄၊ ၅၀၄ ၄၁၂၀
ဖန်တီးနိုင်မယ့် စွမ်းAင်တွေမှာ၊ AခြေခံAဆောက်AUီ တွေနဲ့
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကြားမှာ သိသိသာသာ ကွာခြားမှု ရှိသလား။ info@myanmaryouthnetwork.org
ထောက်ပံ့မှုတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြဖို့ လိုAပ်ပါ တယ်။